Global Voices teny Malagasy » Palestina: Deir Yassin, notsarovana in-60 mihoatra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Jolay 2018 5:02 GMT 1	 · Mpanoratra Razan Ghazzawi Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Israely, Palestina, Ady & Fifandirana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Politika, Tantara
(Lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny Avrily 2008)
Manamarika ny fandripahan'olona tao Deir Yassin , izay namonoan'ny kômandôn'ny Irgun  (tarihin'i Menachem Begin) sy ny Stern Gang  vao maraimbe ireo Palestiniana miisa 100 tany ho any ny andron'ny 9 avrily. Manamarika izany voina nitranga 60 taona lasa izay [70 taona raha ny amin'ny teny malagasy] izany ny bilaogera.
Ny Palestiniana Haitham Sabbah  mametraka rohy mankany amin'ny habaka DeirYassin  ary manoratra:
Ny maraimben'ny 9 avrily 1948, nanafika an'i Deir Yassin , tanàna kely onenan'ny Palestiniana miisa 750, ny kômandôn'ny Irgun  (notarihan'i Menachem Begin) sy ny Stern Gang . Miorina ivelan'ny faritra natokan'ny Firenena Mikambana ho an'ny Fanjakana Jiosy ilay tanànakely; malaza ho milamina ao. Saingy miorina amin'ny tany avo amin'ny lalantsary mampitohy an'i Tel Aviv amin'i Jerosalema. Naravona hametrahana voanjo araka ny Plan Dalet i Deir Yassin ary nomen'ny Haganah , herim-piarovana jiosy lehibe indrindra, alalana ny hery mpampihorohoro tsy ara-dalàna an'i Irgun sy ny Stern Gang hanatontosa ny fananiham-bohitra.
Tamin'ny lehilahy, vehivavy ary ankizy 100 novonoina ankitsirano. Nariana ara-bakinteny manerana ny mandan'ny Tanàna Taloha, nahitan'ny Miss Hind Husseini azy ireo, ny kilonga miisa 53 lasa kamboty, ary nentina ambadiky ny American Colony Hotel nankany amin'ny tranony, izay lasa trano fitaizana kamboty Dar El-Tifl El-Arabi
Indro koa i Sabbah nandrohy nankany amin'ny tranonkalan'ny Institute for Middle East Understanding  [Ivontoerana ho an'ny Fifankahazoana Afovoany Atsinanana], izay manana torohay bebe kokoa momba ilay fandripahana.
Attending The World  nitaratra hazavana amin'ny antony ara-politika nahatonga ny fandripahana, nanatsonga ny tenin'i Menachem Begin, efa nahazo ny Loka Nobel Fandriampahalemana sady Praiminisitra Likud voalohany an'Isiraely:
“Tsy vitan'ny tena nilaina ny fandripahana tao Deir Yassin, fa raha tsy nisy izany dia tsy ho afa-nisandratra ny fanjakan'Isiraely” hoy i Menachem Begin.
Namoaka fijoroana vavolombelona avy amin'ny manamboninahitra taloha tao amin'ny Haganah, ny Col. Meir Pa’el, tamin'ny nahatonga azy haka retirety [hisintaka] tamin'ny tafika isiraeliana tamin'ny taona 1972, ihany koa ny bilaogera:
“Tamin'ny fifampitifirana izay nahafatesana [Irgun] efatra sy naharatrana ampolony… tapitra ny ady talohan'ny mitataovovonana ary nijanona ny feombasy. Na dia efa nitony aza, dia mbola tsy nitolo-batana ny tanàna. Nivoaka avy tany amin'ny fiafenany ny lehilahin'ny Irgun sy ny LEHI ary nanomboka ‘nanadio’ ireo trano. Novonoiny avokoa izay rehetra hitany, na vehivavy na ankizy, tsy niezaka mba hampitsahatra ny famonoana ny mpitari-tafika … Niangavy tamin'ny komandy aho mba hanome baiko ny olona hampitsahatra ny fiti-basy, saingy toa tsia no valiny. Mandritra izany fotoana izany, nampidirina tamin'ny kamiao iray ny Arabo miisa 25 ary nentina nanavatsava an'i Mahne Yehuda sy Zichron Yousef (tahaka ireo gadran'ny “Matson'ny Fandresena” tamin'ny andron'ny Romana). Tany amin'ny fiafaran'ny nitondrana fiara azy ireo dia nampidirina tao amin'ny toeram-pitrandrahana iray anelanelan'i Deir Yasin sy i Giv’at Shaul ry zareo, ary novonoina ankitsirano … Niala ihany koa ireo mpitari-tafika rehefa niangaviana haka ny olony sy handevina ny vatan'ireo Arabo miisa 254. Notontosain'ny vondrona Gadna roa nentina avy any Jerosalema ho ao amin'ilay tanànakely izany asa tsy mahafinaritra izany.”
Tao amin'ny lahatsoratr'i Al- Falastiniya's  iray, I am Dier Yassin [Izaho no Dier Yassin], nilaza ity vehivavy ity fa mihoatra noho ny “isan'ny maty” i Deir Yassin:
Mihoatra lavitra noho ny isan'ny maty na tantara tsotra mila tantaraina mba hahazoana fangorahana izahay.
Nandeha nody aho androany ary nahita fa tsy feno ra ny arabe. Nataoko ho toy ny ahy ny lalana fandehanana tongotra; tsy nisy iray mba nanontany ahy. Nandeha aho, ary nahatsapa fa angamba tsara vintana loatra aho. “deir yassin, deir yassin, efa nahare izay nitranga tao deir yassin ve ianao? Tianao ve ny ho lasa tahaka ny tao deir yassin?” Tsy mila namaly izany fanontaniana izany mihitsy aho. Tsy mila nandositra mihitsy aho tamin'ny fiainako. Tsy mbola nahare feombasy mihitsy aho… Tsy ahy irery ny alahelo – tsy avy amiko izany tamin'ny voalohany, nandova izany fotsiny aho.
Otto's Random Thoughts, Carousel  ary MyDD  nandrohy nankany amin'ny Minisitra Afrikana Tatsimo misahana ny fitsikilovana, ny lahatsoratr'i Ronnie Kasrils  ao amin'ny habaka Electronic Intifada.
Mahita lahatsoratra avy amin'i John Hilley  koa isika, izay mandresy lahatra fa tsy lazaina amin'ny fampitam-baovao tandrefana ny fandripahana tao Deir Yassin:
Anamarihana toe-javatra mampihoronkoditra tao Deir Yassin ny 9 avrily 2008, enimpolo taona taorian'ny nandripahan'ny tafika sionista Palestiniana lahy, vavy ary ankizy miisa 254.
Tsy mahare na inona na inona momba izany ianao ao amin'ny BBC. Tsy nahita fankatoavana [ny fisiany] avy any amin'ny governemantan'i Etazonia, Vondrona Eoropeana ary ireo Tandrefana “sivilize” hafa ianao. Ary azo itokisana fa tsy hahita hafatra alahelo momba izany avy amin'ny fanjakana izay te-handevina ny marina tahaka izany sy ireo hetsika tsimifaditrovana nanjò ireo Palestiniana novonoina.
Ho an'Isiraely, ny mpiara-dia aminy ary ireo fampitam-baovaony, tsy mendrika hanaovana fahatsiarovana manokana i Deir Yassin. Anarana, tanàna, toerana, tsiaro mangirifiry miraikitra mafy ao amin'ny tsikalakalam-pieritreretan'ny Palestiniana fotsiny izany.
Farany, Free the Detainees mizara amintsika sehatra avy any New York manao fahatsiarovana ny fandripahana tao Deir Yassin ato .
Ny sary rehetra dia nindramina tao amin'ny habaky ny Deir Yassine avokoa .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/07/122371/
 habaka DeirYassin: http://www.deiryassin.org/
 Attending The World: http://attendingtheworld.wordpress.com/2008/03/29/israeli-terrorism-massacre-of-deir-yassin/
 Al- Falastiniya's: http://alfalasteenyia.blogspot.com/2008/04/i-am-deir-yassin.html
 lahatsoratr'i Ronnie Kasrils: http://en.wikipedia.org/wiki/Ronnie_Kasrils